Sina no lasa mpamokatra akanjo sy mpanondrana akanjo lehibe indrindra eran-tany
Hatramin'ny naha-niditra an'i WTO an'i Shina dia nanjary ampahany lehibe amin'ny fanondranana entana any Shina ny lamba sy ny fitafiana. Tao anatin'ny folo taona lasa, niaraka tamin'ny fanafoanana tsimoramora ny rafitra quota fanondranana, ny akanjon'i Shina, ny lamba ary ny fanondranana akanjo dia manana tontolo ivelany somary malalaka. Favora ...
Amin'ny maha-firenena mpanondrana akanjo lehibe azy, ny sandan'ny fanondranana akanjo isan-taona any Chine dia mihoatra ny 100 miliara dolara amerikana, izay lehibe lavitra noho ny sandan'ny sandan'ny akanjo. Saingy, niaraka tamin'ny fanovana ny firafitra ara-toekaren'i Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy, nividy tsikelikely ny indostrian'ny akanjo ho ...
Amin'ny maha mpanondrana akanjo lehibe azy dia manondrana akanjo maherin'ny 100 tapitrisa dolara amerikana isan-taona i Sina, mihoatra lavitra noho ny fanafarana azy. Na izany aza, niaraka tamin'ny fanovana ny firafitra ara-toekaren'i Shina tato anatin'ny taona vitsivitsy, niditra tsikelikely tamin'ny sehatry ny fahamatorana ny indostrian'ny akanjo, ary ny sokajy vokatra dia manana ...